मेची अस्पताल भद्रपुरमा सुरु भयो कोरोना परीक्षण – Kanika Khabar
मेची अस्पताल भद्रपुरमा सुरु भयो कोरोना परीक्षण
Kanika Khabar २२ श्रावण २०७७, बिहीबार ०८:०८ August 6, 2020 मा प्रकाशित
साउन २२, झापा
झापाको मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरमा कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को परीक्षण सुरु भएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. पिताम्बर ठाकुरले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजो (बुधबार) दिउँसो ३ बजे प्रयोगशालाको औपचारीक उद्घाटन गरिएको छ । बुधबारबाट गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजालाई अन्य प्रयोगशालासँग क्रस चेक तथा भ्यालिडेशन गरिने मेसु ठाकुरले बताउनुभयो । अञ्चल अस्पताल भद्रपुरको आइसोलेशन कक्षमा रहेका कोरोना सङ्क्रमित मध्ये ५ जनाबाट हिजो स्वाब सङ्कलन गरि नमुना परीक्षण गरिएको छ । प्रयोगशालाबाट प्राप्त नतिजालाई क्रस भेरिफिकेशनका लागि कोशी अस्पताल विराटनगरको पीसीआर प्रयोगशाला पठाइएको छ । मेसु ठाकुरका अनुसार यो क्रम आजसम्म रहने छ । नतिजामा कुनै फरक नपरेमा भोली अर्थात् शुक्रबारबाट प्रयोगशालाले नियमित परीक्षण सुरु गर्नेछ ।
मेची अञ्चल अस्पतालको आइसोलेशन कक्षमा अहिले इलाम र झापाका गरी १७ जना कोरोना सङ्क्रमितको समेत उपचार भईरहेको छ । संघीय सरकारले घोषणा गरेको लामो समयसम्म समेत प्रयोगशाला सञ्चालन नभएको भन्दै गुनासो बढ्दै जाँदा प्रयोगशालाको परीक्षण औपचारीक रुपमा सुरु भएको हो । प्रयोगशालालले एक पटकमा कम्तिमा ९० वटा नमुना परीक्षण गर्ने र जसको लागि ३ देखि ४ घण्टाको समय लाग्ने बताइएको छ । प्रयोगशालालाई २ सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको डा. ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । ३ जना चिकित्सक सहित सुरु भएको प्रयोगशालामा ८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोली रहने गरीको तयारी भइरहेको ठाकुरको भनाइ छ ।